Wasiir Xundubey oo sheegay in dowladdu aqbashay xabad joojin | Dhacdo
Home Wararka Maanta Wasiir Xundubey oo sheegay in dowladdu aqbashay xabad joojin
Wasiir Xundubey oo sheegay in dowladdu aqbashay xabad joojin
Wasiirka Amniga Somaliya, Xasan Xundubey Jimcaale ayaa xaqiijiyay in Dowladda Federaalka aqbashay dadaaladii ay garwadeenka ka ahaayeen Odayaasha Dhaqanka ee Magaalada Muqdisho ee xiisadda lagu qaboojinayay.
Wasiirka ayaa sheegay in Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaruhuba ay la kulmeen odayaal iyo siyaasiyiin u istaagay in laga baaqsado dagaal kale oo ka dhaca Magaalada Muqdisho.
“Waan is aragnay waxgarad badan oo siyaasiyiin iyo dhaqan isugu jira, waxay noo dhiibeen farriin nabadeed, oo ay noo sheegeen cadowga bannaanka maahee aysan ogoleyn wax dagaala oo bulshada dhexdeeda ka dhaca, farriintaasna waan qaadanay.” Ayuu yiri Wasiirka oo la hadlay VOA.
Wasiir Xundubey ayaa yiri “Waxay kaloo la kulmeen Madaxweyne Xasan Sheekh, wayna nagu soo warceliyeen, waxayna noo sheegeen in xabaddii la joojinayo oo nabad lagu dhameynayo wax kasta oo wadahadal furan yahay. Wixii siyaasad ahoo leesku haysto dib looga wadahadlo, laakiin marka hore in nabadda la wada qaato.”
Dhanka kale Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay inuu la soo xiriiray Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, Maxamed Xuseen Rooble, isagoo wada farriin nabadeed.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay inuu soo dhaweeyay baaqa Ra’iisal Wasaaraha, haddiiba uu xakameyn karo Ciidamada Dowladda.
“Mar dhexe ayuu Ra’iisal Wasaaraha ila hadlay, oo uu ii sheegay in uu rabo in la joojiyo dagaalka.” Ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo intaa ku daray “Haddii aad ciidanka wax ka qaban karto, joojin-na karto oo awoodii aad leedahay soo dhawoow, intaas ayaa na dhex martay.”
Xaaladda Magaalada Muqdisho ayaa maanta degan, ka dib dagaalkii gelinkii dambe ee shalay illaa xalay ka socday qaybo ka mida magaalada.
Previous articleWaan-waan laga dhex bilaabay dowladda & mucaaradka iyo xabad joojin ay aqbaleen
Next articleSomaliya oo saxiixday heshiis ay uga mid noqoneyso Wadamada Afrika ee awoodda u leh yareynta khataraha